Kristy ao anatinareo
"Diniho ny tenanareo, na mitoetra amin’ ny finoana hianareo, na tsia; izahao toetra ny tenanareo. Moa tsy fantatrareo va ny amin’ ny tenanareo, fa ao anatinareo Jesosy Kristy, raha tsy olona nolavina hianareo?" (2 korintiana 13:5)
"Indro, efa mitsangana eo am-baravarana Aho ka mandondòna; raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana, dia hiditra ao." (Apokalypsy 3:20)
"Ary rehefa nilaza izany Jesosy, dia nakarina Izy, raha mbola nijery izy ireo; ary nisy rahona nitondra Azy, ka tsy hitan'ny masony intsony Izy. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo, nisy roa lahy teo anilany niakanjo akanjo fotsy, izay nanao hoe: Ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? iny Jesosy Izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo Azy niakatra ho any an-danitra." (Asan'ny Apostoly 1:9-11)
Izao vaninandro iainantsika izao dia vaninandro anomanana indrindra ny fiverenan'ny Tompo.
"Rankizy, izao no ora farany." (1 Jaona 2:18)
Raha tamin'ny 2000 taona lasa aza tamin'ny andron'ny epistily no efa nambara fa efa ora farany, dia izao vanim-potoana misy antsika izao izany dia efa tena segondra farany. Izany no anton'ny fisehoan-javatra maro mifamahofaho eto amin'izao tontolo izao ity.
Matio 24, Lioka 21: dia manambara izany fotoana ihavian'ny Tompo izany
"Fa miambena ka mivavaha mandrakariva, mba hahery hianareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrehan’ ny Zanak’ olona." (Lioka 21:36)
Ahoana no ahafahantsika miatrika ity fotoan-tsarotra ity?
Ny fotoan-tsarotra izany dia tsy azontsika ialana, tsy azontsika andosirana io, tsy ny fitadiavana vola be no ahafahantsika miatrika an'io, tsy ny fitadiavana fomba isan-karazany izay heverin'ny olona no ahafahana miatrika an'io, fa ambaran'ny Tenin'Andriamanitra mazava tsara, MIVAVAHA, MIAMBENA.
Very hevitra ny olona, manam-bola fa tsy misy filaminan-tsaina, manana an'izao rehetra izao fa tsy mahita tory.Manontany hoe mety mbola misy fiadanana ve? mety mbola misy fahasambarana ve amin'izao vaninandro iainantsika izao? ieny tena mbola misy. Ny tena atao hoe fahasambarana dia ny filaminan-tsaina, fiadanam-po ao anatin'izao tontolon'ny korontana izao.
Milamina, miadana ao anatin'ny tontolon'ny korontana,"Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo; tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao no fanomeko anareo" (Jaona 14:27)
Fa raha mbola mitovy amin'izao tontolo ihany isika dia ho diso fanantenana isika indray andro any, ho diso fanantenana isika rehefa ho avy ny Tompo.
Hitari-dalana antsika aho mba hahafahantsika manana antoka aloha voalohany indrindra hiatrika ny fotoan-tsarotra rehetra, ary manana antoka handova ny mandrakizay. Manana toro-lalana ny Tenin'Andriamanitra.
Ao anatin'ny baiboly dia misy vanim-potoana telo ahafahan'Andriamanitra manatona ny zanak'olombelona
1- vanim-potoana ny testamenta taloha: Andriamanitra miresaka mivantana amin'ny zanak'olombelona ( Abrahama,Mosesy, Isaia,sns)
Fa tsy nanakana ny zanak'olombelona tsy hanota izany (nanamboatra andriamanitra ho azy ireo tamin'ny volamena)
2- Jesosy Andriamanitra tonga nofo: testamenta vaovao
Fa dia mbola maro ihany no tsy nino
3- vanim-potoanan'ny Fanahy Masina: Kristy ao anatinareo.
Ny vanim-potoanan'ny Fanahy Masina dia midika hoe Kristy ao anatinareo
Ny Kristianina marina amin'izao vaninandro iainantsika izao, dia tsy olona mpanara-dia an'i Jesosy fa Jesosy tena velona ao anatiny, vaninandro fanomanana ny fiavian'i Jesosy izao, vaninandro fanomanana ny idirantsika any amin'ny fiainana mandrakizay izao.
Ny olona rehefa tonga ao amin'Andriamanitra marina, tafiditra amin'ny tena atao hoe zanak'Andriamanitra marina dia tsy olona manara-dia ny Tompo fa olona mpiombon'aina aminy. misy olona milaza fa kristianina nefa mbola afaka manao ny sitrapony, mbola afaka manao izay mahafinaritra azy, tsy marina izany.
"Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolin'ny Fanahy Masina, Izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra? ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo." (1 Korintiana 6:19)
Rehefa tafiditra ao anatintsika io Jesosy io dia tsy tompon'ny tenantsika isika fa manomboka eo amin'izay dia Jesosy amin'izay no mitondra ny fiainanao, ny tenanao, ny tokantranonao, ny asanao. Tsy azonao sarahina ny fiainanao sy Jesosy Kristy.
Ny ankamaroantsika dia mino an'i Jesosy kristy ho Tompo, mino fa efa maty teo amin'ny hazofijaliana Izy, fa ny devoly koa anie mino an'izany e, nefa rehefa jerena akaiky ny fiainantsika dia kristianina mijangajanga, kristianina misotro toaka. Nefa hoe Jesosy ao anatinao, dia Jesosy izany entinao mamitaka? entinao mijangajanga?
Ny olona rehefa tafiditra ao aminy Jesosy dia tsy mitaona azy hanao hadalana Izy fa mitaona anao hanatona ny fahamasinan'Andriamanitra.Betsaka ny mpitondra Fiangonana manao hadalana, mitaona ny olona mankany amin'ny fahaverezana.Androany tadidio tsara fa raha tsy ao anatinao io Jesosy io dia ho any amin'ny helo hianao.
Tandremo fa betsaka ny mpaminany sandoka, ny fanahy mamitaka, misy olona voakarama anie hitarika ny olona ho any amin'ny fahaverezana fa tsy fantatrao izany raha tsy ao anatinao Jesosy.
Ny ota tsy hanan-kery aminareo : "Fa ny ota tsy hanan-kery aminareo; fa tsy mba ambanin’ ny lalàna hianareo, fa ambanin’ ny fahasoavana." (Romana 6:14)
Tsy afaka manatona ny seza fiandrianan'Andriamanitra hianao raha tsy manana an'i Jesosy fiainana.
Rehefa tonga Jesosy, mihiratra amin'izay ny masom-panahinao. Raha tena nandray an'i Jesosy marina ny olona, ny ao an-tokantrano no mahita ny fiovana voalohany indrindra. raha tena ao anatinao Jesosy dia manova ny fiainan-tokantranonao Izy.
Aoka tena hiaiky hianao fa diso teo anatrehan'Andriamanitra, ny heloka sy ny fahotana no mampisaraka ny olona amin'Andriamanitra. Mila mibebaka sy mangataka famelan-keloka amin'Andriamanitra hianao.